Gaalkacyo: Madaxweynaha Puntland oo la shiray dhalinyarada Gaalkacyo
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hawlo shaqo u jooga magaalada Gaalkacyo ee Xarunta gobolka Mudug ayaa maanta 13-July-2016 kulan la qaatay dhallinyarada aqoonyahanka ah ee gobolka Mudug.
Kulankaan oo dabo joogey kulamo kala duwan oo uu Madaxweynaha dawladda Puntland la qaadanayey qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Mudug ayaa waxaa diiradda lagu saarayey sidii ay dhallinyaradu qayb uga qaadan lahaayeen nabad-gelyada iyo horumarinta gobolka Mudug.
Dhallinyaradaasi ayaa muddadii uu kulanku socdey u soo jeediyey Madaxweynaha talooyin badan oo la xiriira sidii wax looga qaban lahaa amni darrada kasoo cusboonaatay gobolka Mudug iyo sida ugu wanaagsan ee ay dhallinyaradu uga qayb qaadan karaan dedaalladaasi amniga lagu xaqiijinayo, maadaama oo dadka ugu badan ee falalka amni xumo ka geysta gobolka ay yihiin dad dhallin yaro.
Sidoo kale Madaxweynuhu waxa uu sheegay in dawladdiisa inteeda badani ay tahay dad dhallinyaro ah isla markaana ay ka duulayso aragtida ah in %70 dadka reer Puntland ay yihiin dad dhallinyaro ah, sidaa awgeedna xoogga la saari doono sidii loo sii dardar-gelin lahaa kaalinta dhallinyarada iyo haweenku ay ku leeyihiin siyaasadda.
Ugu dambayn Madaxweynuhu waxa uu ugu baaqay guud ahaan dhallinyarada reer Puntland in ay aaminaan dalkooda oo ka waantoobaan Tahriibka, mukhaadaraadka iyo falalka xagjirnimada ah isla markaana gacan ka geystaan dedaallada lagu horumarinayo dalkooda.